Fikarohana momba ny firaisana Ny tranga fanalefahana indray an'i Lou Gehrig | Christian Haupt sy Christina Gehrig | Cathy Byrd - Fikarohana Reincarnation
From: Ilay zazalahy izay nahalala fa be loatra, by Cathy Byrd-Video omenao eto ambany
Lou Gehrig, teraka tao 1903, dia iray amin'ireo mpilalao baseball malaza indrindra teo amin'ny tantara, tsy noho ny talenta ihany, fa noho ny fahafatesany amyotrophic lateral sclerosis (ALS), aretin'andoha neuromuscular izay fantatra ankehitriny amin'ny aretin'i Lou Gehrig. Nodimandry tamin'ny 2 Jona 1941 i Gehrig tamin'ny faha-37 taonany.
Christian Haupt, zanak'i Michael Haupt sy Cathy Byrd, dia teraka tao amin'ny 2009. Araka an'i Cathy reniny, hatramin'ny naha-2 taona azy dia niharan'ny fanoherana ny baolina i Christian ary tamin'io taona io dia nisisika ny nanao fanamiana baolina baseball, anisan'izany ny kiraro amin'ny takelaka, na aiza na aiza nalehany.
Tsy liana tamin'ny zavatra hafa i Christian ary tsy hanao lalao hafa afa-tsy ny baseball. Hatramin'ny fotoana nahafahany nandeha dia nitantara i Cathy fa nitondra batina baseball hazo kely izy. Tsy nisy dikany izany rehetra izany satria tsy nisy liana tamin'ny filalaovana baseball. Michael, rain'i Christian, dia nihalehibe tany Alemana izay tsy nilalao baseball, ka tsy izy no nahatonga ny zotom-pony.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha Ho mpilalao baseball ary Mpisotro toaka
Hatramin'io dia afaka niteny izy, dia nanizingizina ny Kristianina fa "mpilalao baseball lehibe" izy. 1
Taorian'ny nametrahan'i Cathy lahatsary tao amin'ny YouTube an'ny baolina kitra kristiana, dia nieli-patrana ilay lahatsary ary nisarika ny sain'i Adam Sandler, izay teo am-panaovana ny sarimihetsika filma baseball, Izay ny zanako, izay nivoaka tao amin'ny 2016. Tian'i Adam ny horonan-tsary ka nanasa ny Kristiana hanao ny anjara asany ao amin'ny sarimihetsika, izay nalaina tao Cape Cod, Massachusetts.
Nekena ilay tolotra, ary nidina an-dalamby tany Boston i Cathy sy Christian, mba haka ny Cod. Rehefa nametra-pialana teo amin'ny seza izy ireo dia nanao fanambarana tsy mahazatra:
“Rehefa lehibe aho dia tsy nanao fehikibo ary nisotro toaka,” izay nahatonga ny mpandeha manodidina hihomehy. 2
Fihetseham-po taloha: tsy tia an'i Babe Ruth ny Kristianina
Taorian'ilay fitifirana sarimihetsika dia noraisin'i Cathy ho an'ny lalao baseball tao amin'ny kianjan'i Fenway ao Boston. Tao, Kristiana dia nahita sarin'i Babe Ruth. Ho setrin'izany, nanao fanambarana hafa tsy mahazatra ny kristiana:
“Tsy tiako izy. Ratsy fanahy tamiko izy! ” Nanontany azy i Cathy hoe: "Ratsy anao i Babe Rut?" Christian ao anaty toe-javatra mikorontana dia nilaza hoe: “eny!” Christian dia nanohy nampikorontan-tsaina azy indrindra, ka nahatonga azy ireo tsy maintsy nandao ny ballpark taorian'ny fisokafana roa monja. 3
Nanizingizina ny kristiana fa nanana fiainana taloha izy
Niverina tany amin'ny faritr'i Los Angeles, dia namerimberina hoe:
“Neny, mpilalao baseball lava aho taloha.” Nanitsy azy i Cathy tamin'ny filazany hoe: “Eny, ho mpilalao baseball lava ianao indray andro any.” Tezitra i Christian tamin'ny fampiasana ny ho avy ary namerina izy hoe: “Tsia, mpilalao baseball lava toa an'i Dada aho!”
"Efa lehibe ianao? Tahaka an'i Daddy? Namaly tamin'ny endriny farany i Christian hoe: "Eny!" 4
Ankoatra izany, nilaza tamin'ny anabaviny ny kristianina fa fony izy mpilalao baseball lehibe dia naratra ny lohaliny ary tsy maintsy nilaozany ny nilalao. 5
Tamin'ity fotoana ity dia tonga tao an-tsain'i Cathy ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ho fanazavana ny fanambaran'ny zanany lahy, saingy io hevitra io dia nifanohitra tamin'ny finoana kristiana. Rehefa niseho ny porofo misimisy kokoa momba ny fananana fiainana taloha ny Kristiana, dia nizara i Cathy fa ny tolona nataony tamin'ny rafitry ny finoana efa nisy azy dia lehibe tokoa ka nahatsapany fa "namitaka an'i Jesosy izy."
Ity ady ity koa dia nitranga tamin'i Bruce Leininger rehefa namotopototra ny fahatsiarovana ny fiainan'ny zanany lahy, izay voalaza ao amin'ny: Trangam-panjakan'olo-tokana ho an'i James Huston, Jr. | James Leininger
Fahatsiarovana ny fiainana teo aloha: Ny kristiana dia mahafantatra ny fepetra voalohan'ny 1900
Tamin'ny fotoana iray hafa dia nilaza i Christian hoe: “Neny… fony mbola zaza aho taloha dia nisy afo tao an-tranoko,” ary nanazava bebe kokoa hoe: “Nisy afo tena izy — tao anaty jiro!” Tsapan'i Kathy fa miresaka momba ny afo ampiasaina amin'ny jiro entin'ny entona voajanahary izy, zavatra izay tsy nianarany tamin'ny fomba mahazatra. 6
Nanohy ny diany, hoy ny kristiana, "Raha mpilalao baseball lehibe aho-tahaka ny daddy-Nandeha tany amin'ny hotely aho isaky ny alina"
Nanontany i Cathy hoe: “Nanidina fiaramanidina ve ianao?”
"Tsia, ny fiarandalamby matetika," hoy ny navalin'ny Kristianina. 7
Ankoatr'izay, hoy izy, "nilalao ny lalao izahay nandritra ny andro satria tsy nisy jiro teny an-kianja tamin'ny andro taloha." 8
Ny alina iray alina, indray alina talohan'ny naha-matory ny Kristianina, dia niteny hoe:
“Nisolo vy izahay taloha, nefa tsy nanao aroloha.” Hitan'i Cathy fa marina koa izany, satria hitany fa tsy nampidirina mandra-pahatongan'ny tapaky ny taona 1950 izany. 9
Ny kristianina dia manondro ny tenany ho Lou Gehrig amin'ny fiainana taloha
Ny kristiana dia nanohy niraiki-po mafy tamin'ny Babe Ruth. Tamin'ny fiezahana hamantatra hoe iza no mety ho Kristiana, raha namaritra ny fiainany taloha izy dia nametraka sarinà ekipa baseball tamin'ny vanim-potoan'i Babe Ruth i Cathy.
Nosoratan'i Cathy ny sary mainty sy fotsy tamin'ny ekipan'ny 1927 Yankees ary nanondro an'i Babe Ruth i Christian ary nilaza hoe "Babe Rota ny moana." Nanontany i Cathy hoe:
“Mieritreritra ve ianao fa misy mpilalao amin'ity ekipa ity izay tsy tia an'i Babe Ruth?” Tamin'ny mpilalao 30 na tokony hofidin'i Christian dia nifantina mpilalao iray izy ary nilaza hoe "Him!" Nanontany i Kathy avy eo hoe "Fantatrao ve izy?" Namaly i Christian hoe "Izaho izany." 10
Nofintinin'i Cathy sary hafa an'ny Yankees ary nanontany raha misy mpilalao baseball hafa tsy tia an'i Babe Ruth. Isaky ny kristiana dia nanondro ilay lehilahy nijangajanga niaraka tamin'ny sary teo amin'ny sary rehetra. 11
Tsy nahafantatra i Cathy hoe iza io mpilalao io no "Googled" 1927 Yankees "ary nahita fa i Lou Gehrig ilay lehilahy teo amin'ny sary. Ny kristianina dia telo taona ary roa volana tamin'ny fotoana nanamarinana izany. I Cathy dia nanamarika fa ny kristianina dia manana fetra mitovy amin'ny toerana iray tahaka an'i Lou Gehrig.
Kathy dia nampiseho kristiana sary iray izay noheveriny fa i Babe Ruth sy Lou Gehrig ary ny sandriny nifamihina. Nianatra ny sary i Christian ary nilaza hoe, "Tsy moana i Babe Ruth. Izany no mpanazatra. "Rehefa nijery ilay printy tsara teo ambanin'ny sary i Kathy dia nahita fa marina ny Kristianina. Ilay lehilahy teo akaikin'i Babe Ruth dia Joe McCarthy, ilay mpanazatra. Tadidio io zava-nitranga io talohan'ny nahalalan'ny Kristianina ny fomba hamakiana azy. 12
Fihetseham-piainana taloha: Nianaran'i Cathy ny antony nahatonga an'i Lou Gehrig tsy tiany i Babe Ruth
Nanampy an'i Cathy ny antony nahatonga an'i Lou Gehrig ho tezitra tamin'i Babe Ruth. Hitany fa nianatra tsara i Lou Gehrig sy i Babe Ruth mandrapahafatesany. Na dia samy nandray anjara tamin'ny New York Yankees izy ireo, dia tsy nifankahalala ny roa lahy nandritra ny fito taona, hatramin'ny janoary 4, 1939, rehefa nanambara ny fisotroan-dronono i Lou Gehrig tamin'ny baseball noho ny ALS.
I Cathy dia nahita fa Babe Ruth sy Lou Gehrig no mpinamana be nanomboka tamin'ny 1925, saingy nivoady tsy hiresaka intsony taorian'ny zava-nitranga iray nitranga teo anelanelan'ny renin'i Lou, Christina Gehrig, sy Babe tao amin'ny 1932. I Christina dia lasa renim-pianakaviana voatokana ho an'i Babe Ruth izay natsangana tao amin'ny trano fitaizana zaza kamboty ary tsy nanana reny manokana. Navoakan'i 1927 Babe Ruth dia lasa fitaovana tao amin'ny trano Garrick, izay mbola nipetraka niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Lou. Babe dia nanambady azy 1929 ary nanomboka niala ny zanany vavy 11 taona avy amin'ny fanambadiana teo aloha nanoloana an'i Christina Gehrig fony izy sy Claire vadiny. Rehefa niteny tamin'i Babe sy Claire i Christina dia tsapany fa tsy miraharaha ny zanany vavy izy ireo, dia ny fifaranan'ny fifandraisana misy eo amin'i Babe Ruth sy ny fianakaviana Gehrig. Ny legioma dia milaza fa ireo lehilahy roa ireo dia tsy nifankahalala mihitsy nanomboka tamin'io andro io nanomboka tamin'ny 1932. 13
Ankoatra izany dia nahafantatra i Cathy fa nanana laza malaza i Lou Garrick, raha fantatra kosa ny Babe Ruth noho ny fisotroana tafahoatra sy ny fiterahana. 14
Ny kristianina dia manondro ny reniny Cathy ho Reniny efa Maty, Christina Gehrig
Rehefa nasehon'i Cathy ny sarin'ireo ray aman-drenin'i Lou Gehrig, dia gaga be izy. Taorian'ny nanamafisan'i Kristiana fa ny anaran'ny ray aman-drenin'i Lou dia i Henry sy Christina dia nanondro an'i Christina izy ary niteny hoe: "Neny ianao, ianao ianao." 15
Ny fikarohana fanao amin'ny vatana dia mampiseho fa ny olona dia manao drafitra mandritra ny androm-piainana mba ho tafaraka amin'ny olona efa fantany sy tiany taloha. Eto amin'ity hazavana ity dia avereno jerena: Ian Stevenson ny Fianarana Ankizy
Taorian'ny nanambaràn'i Christian fa i Cathy reniny, koa i Lou Gehrig renin'i Christiana, dia nanapa-kevitra i Cathy hijery izany. Nandeha nandritra ny fotoam-pialan-tsasatra nandritra ny androm-piainany izy ary tamin'ny fanombantombana nataony, dia nokapohiny nandritra ny androm-piainan'i Christina Gehrig nandritra ny fivoriana telo. Cathy dia mamaritra ny fomba nanesorana azy, dia nianatra momba ny fiainan'i Christina Gehrig izay tsy nianarany tamin'ny fomba mahazatra izy. Nanamarina izany antsipiriany izany tamin'ny alalan'ny fikarohana lalina izy.
Miantehitra tanteraka amin'ny renin'i Lou Gehrig i Cathy ary nanambara mihitsy aza i Christian fa mino izy fa renin'i Christiana Gehrig tamin'ny fiainany taloha.
Ireo hetsika Synchronistic ary ny "Wink" avy amin'ny Universe
Amin'ny tranga vao teraka dia hita matetika ny fisehoan-javatra momba ny vanim-potoana sy ny fisehoan-javatra mifanaraka amin'ny synchronistic, araka ny voalaza ao Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano. Ireo fisehoan-javatra ireo dia azo raisina toy ny torolalan'ny mpitarika fanahy na ny fanahin'ny tena manokana.
Ny zava-nitranga toy izany dia nitranga rehefa nandehandeha tany East Coast i Cathy sy Christian mba hitsidika ny tranon'i Lou Gehrig sy ireo tranonkala mifandraika amin'izany any New York. Ho fiverenan'izy ireo dia nanana famandrihana mialoha izy ireo hanidina avy any Albany, New York mankany Los Angeles amin'ny alàlan'ny Charlotte, North Carolina. Rehefa fantany fa nesorina ny sidina Charlotte, noho ny antony fohy dia nanapa-kevitra ny handray fiaramanidina ho any Tampa Bay, Florida ary avy eo dia hifandray amin'i Los Angeles ny ampitso maraina.
Nipoitra ny Yankees nilalao ny Tampa Bay Rays tamin'io faran'ny herinandro io ary nanapa-kevitra ny hanemotra ny fiverenany any an-trano androany i Cathy ary hanatrika ny lalao.
Talohan'ny lalao, niangavy an'Andriamanitra Andriamanitra mba hamela azy hihaona amin'i Evan Longoria avy ao amin'ny Tampa Bay. Fantatr'izy ireo tao amin'ny lalao fa nopotehina ny sarin'i Lou Gehrig nalaina sary be sary. Nividy tapakila iray i Cathy.
Avy eo, talohan'ny lalao, lahatsary iray naseho an'i Lou Gehrig nanome ny lahateniny "Luckiest Man Alive" rehefa nanambara ny fisotroan-dronony noho ny ALS. Niharihary fa nandeha an-tsehatra ho an'ny fananganana fanangonana an'i Lou Gehrig ho an'ny ALS Awareness ny Cathy sy Christian. Cathy nieritreritra momba ireo fepetra:
“Eto izahay, tao amin'ny tanàna iray izay tsy tokony hahatongavanay, niomana ny hijery lalao Yankees, ary misy horonantsary Lou Gehrig milalao eo amin'ny efijery lehibe.” 16
Nolazain'i Cathy avy eo fa rehefa nifarana ny lanonana fanombohan'ny talata, dia nandeha niankandrefana izy sy ny kristianina mba hijery akaiky kokoa ireo mpilalao rehefa nirehitra teny an-tsaha izy ireo. Avy eo, avy any amin'ny toerana tsy fantatra, dia nisy lehilahy iray izay nampiditra ny tenany ho Kristiana. Evan Longoria izany.
Mba hialana amin'izany rehetra izany, niafara tamin'ny fandresena tamin'ny sarin-tsarimihetsika Lou Gehrig i Cathy sy Christian. Nantsoin'i Cathy ho toy ny "maso avy amin'izao tontolo izao" ireo zava-nitranga nifanaraka ireo ary fanamarinana fa teo amin'ny làlana marina izy. 17
Raha tokony ho ny fifandrifian-javatra fotsiny, araka ny voalaza, mino aho fa ireny fisehoan-javatra ireny dia tarihin'ny fanahin'ny fanahy, ny torolalan'ny fanahy na ny fanahintsika manokana, mba hampita amin'ny fomba rehetra fa mandeha amin'ny fanadihadiana ireo tranga vao teraka indray isika.
Fitovozan-kevitra ara-batana: Nanamarika ny fitoviana ara-batana “hafahafa” eo amin'i Christian sy Lou Gehrig i Cathy. Amin'ireo tarehy roa ireo dia misy volo madinidinika misongadina miaraka amin'ny iray amin'ny ankavia izay lalina kokoa noho ilay eo ankavanana. Ankavia i Christian, toa an'i Lou koa. Mahaliana ny mandinika ny fivoaran'ny endrik'i Christian rehefa mandeha ny fotoana, hijerena raha mitohy ny fitoviana amin'ny endrika tarehy.
Ao amin'ny James Huston, Jr. | Ny raharaha James Leininger, manana sary ety amin'ny ambaratonga efatra isika izay mampiseho ny endriky ny endriky ny endrika amin'ny fotoana. Mba hijery ireto sary ireto dia mandehana any: Ny raharaha James Leininger
Ny fiainana taloha talenta sy ny fitondran-tena: Ny lehiben'ny Christian dia maneho ny fitaintainan'i Lou Gehrig amin'ny baseball, ary koa ny talentany. Nolazaina fa aleon'i Lou Gehrig milalao baseball fa tsy mihinana azy, ny iray dia milaza Cathy ny anjarany kristiana. 18
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Raha raisina ireo tranga ireo, dia ny renin'i Lou Gehrig, Christian, dia tafaray indray amin'ny zanany Lou noho ny maha-olona an'i Cathy Byrd sy ny zanany lahy, kristiana.
Fanahy Masina ao amin'ny Firaisana ara-nofo any am-parany: Azo inoana fa nitari-dalana ny fanahy na ny fanahin'ny kristianina ny fisehoan-javatra teo amin'ny lalao Yankee tao amin'ny Tampa Bay, izay noheverin'i Cathy ho toy ny fanangonana sy fanamafisana avy amin'izao tontolo izao fa izy ireo dia teo amin'ny lalam-pahamendrehana raha ny amin'ny maha-kristiana azy ny fahaterahan'i Lou Gehrig. Ireo karazana tranga ireo dia mahazatra any amin'ny toe-java-mitaiza vao teraka.
Ny mahaliana dia nanohana ny bokin'i Cathy i Jack Canfield, Ilay zazalahy izay nahalala fa be loatra. Hijery ny: Trangam-panjakan'olo-tokana ao Horatio Alzeria Jack Canfield
Byrd, Cathy, TIzy ilay zazalahy izay nahalala loatra, Hay House, Inc., 2017, p 2